Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » United Airlines manendry VP vaovao
Nanambara ny United Airlines androany fa i Michael Leskinen dia voatendry ho filoha lefitry ny Corporate Development and Investor Relations. Leskinen amin'izao fotoana izao dia talen'ny fitantanana ny fifandraisana Investor. Amin'ny anjara asany nitarina dia hitarika koa i Leskinen Asa fampiasam-bola stratejika an'ny United anisan'izany ny United's hetsika fampiasam-bola amin'ny kaompaniam-pitiavana.
"Ny zavatra niainan'i Mike tamin'ny naha mpamatsy vola sy fahalalana ny indostria azy, miaraka amin'ny fahombiazany tamin'ny fananganana fifandraisana matanjaka an'ny tompon-trosa, no nahatonga azy ho mpanatanteraka sahaza hitarika ny ezaka fampandrosoana ny orinasa," hoy ny filoha lefitra mpanatanteraka sy CFO Gerry Laderman.
“Nasehontsika fa eo amin'ny lala-mahitsy i United miaraka amin'ny drafitra stratejika ary vao nanomboka nahatsapa ny fahaizan'i United rehetra. Rehefa mijery ny ho avy isika dia hanohy hanao fampiasam-bola mifehy izay hampisondrotra ny tombony amin'ny fifaninanana. Ny fiavian'i Mike dia nahatonga azy hanana fahaizana manokana handanjalanja ireo famatsiam-bola ireo raha oharina amin'ny sandan'ny intrinsika ao amin'ny anjarantsika manokana, ”hoy ny filoha Scott Kirby.
Leskinen dia nanatevin-daharana an'i United tamin'ny Janoary 2018 ary tamin'izany fotoana izany dia nitana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny orinasa amin'ireo tompon-tany. Talohan'ny nidirany tao United, Leskinen dia talen'ny fahefana mpanatanteraka ao amin'ny JP Morgan Asset Management, izay nitarihany ny ezaka fampiasam-bolan'ny orinasa amin'ny aérospace, fiarovana ary seranam-piaramanidina.
Leskinen dia nahazo ny mari-pahaizana bakalorea tamin'ny Arizona State University sy ny MBA avy amin'ny University of Pennsylvania. Leskinen dia hanao tatitra amin'i Laderman. Mipetraka any Chicago i Leskinen sy ny vadiny ary manan-janakavavy telo.